मनाङ मस्र्याङ्दी आहा रारा गोल्डकपको फाइनलमा - Online Majdoor
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १२:२२
कास्की, २९ फागुन । मनाङ मस्र्याङदी क्लब पोखरामा सञ्चालन भइरहेको १८ औँ संस्करणको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर क्लबस्तरीय आहा रारा गोल्डकप फूटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
यही फागुन २२ गतेदेखि पोखरा रङ्गशालामा भइरहेको प्रतियोगिताको बिहीबार सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा चिरपरिचित प्रतिपस्र्धी नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि ३–२ को रोमाञ्चक जित निकाल्दै मनाङ प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेको हो । मनाङले अब उपाधिका लागि चैत १ गते नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
खेलमा मनाङले पहिलो हाफमा दुई तथा दोस्रो हाफमा एक गोल ग¥यो । आर्मीले पहिलो र दोस्रो हाफमा समान एक गोल गरेको थियो । खेलको चौथो मिनेटमै मनाङका विदेशी खेलाडी फ्लोरेन्टले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाउनुभयो । सुशील राईले बायाँ साइडबाट प्रहार गरेको कर्नर बललाई पेनाल्टी एरियामा विमल रानाले मिलाइदिएको पासमा फ्लोरेन्टले गोल गर्नुभएको हो ।
मनाङले २९ औँ मिनेटमा विमल रानाको गोलबाट अग्रता दोब्बर बनायो । अञ्जन विष्टले मिलाइदिएको पासमा डिवक्सभित्रबाट रानाले प्रहार गरेको बलले जाली चुमेको थियो । खेलको ४१ औँ मिनेटमा आर्मीका कप्तान भरत खवासले गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काउने कोसिस गर्नुभयो । सुमन अर्यालको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठले हेडमार्फत मिलाइदिएको पासमा पेनाल्टी क्षेत्रबाट खवासले हेडमार्फत गोल गर्नुभएको हो ।
दोस्रो हाफमा खेलमा फर्कन आर्मीले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा ८१ औँ मिनेटमा मनाङका अञ्जन विष्टले गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गर्नुभएकामा ८३ औँ मिनेटमा आर्मीका दीपकुमार लामाले गोल गर्दै खेल रोमाञ्चक अवस्थामा पु¥याउनुभयो । खेलमा ७७ औँ मिनेटमा दीपक गुरुङको स्थानमा मैदान प्रवेश गर्नुभएका लामाले अर्का वैकल्पिक खेलाडी टङ्क बस्नेतको क्रस पासको सदुपयोग गर्दै सुन्दर गोल गर्नुभएको थियो ।
बराबरीका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरे पनि खेलको अन्तिम तथा इन्जुरी समयमा प्राप्त केही अवसर खेर फाल्दा साविक उपविजेता आर्मी यसपटक फाइनल पुग्न सकेन । आर्मी आहा रारामा चारपटक फाइनलमा प्रवेश गरे पनि हालसम्म उपाधिबाट विमुख हुँदै आएको छ ।
सहीद स्मारक लिगमा मनाङले १–० ले आर्मीलाई पराजित गरेपछि यी दुई टोली पहिलोपटक पोखरामा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् । खेलमा मनाङका फ्लोरेन्ट ‘म्यान अफ दी म्याच’ घोषित हुँदै रु. पाँच हजार पुरस्कार तथा ट्रफी प्राप्त गर्नुभयो । पोखरेली दर्शकले सर्वाधिक मन पराउने मनाङले हालसम्म पाँचपटक आहा राराको उपाधि चुमेको छ । प्रतियोगिताको दोस्रो, तेस्रो, १० औँ, १४ औँ र पन्ध्रौँ संस्करणमा मनाङ च्याम्पियन बनेको हो ।
खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले खेलको सुरुमै गोल खान पुग्दा टोली दबाबमा परेको बताउँदै सेन्ट्रल डिफेन्स मजबुत नहुँदा बढी मिस पास भएको बताउनुभयो । विपक्षीको ‘टाइट मार्किङ’का कारणले भरत खवासलगायतका खेलाडी खुलेर खेल्न नसकेको तथा उनीहरूको मार्किङलाई तोड्न कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।
मनाङका प्रशिक्षक फुजा टोपेले आर्मी बलियो र अनुभवी टोली रहे पनि महत्वपूर्ण खेलमा जीत हासिल गर्दै फाइनल प्रवेश गरेकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । आफूहरू उपाधिका लागि खेल्ने भएकाले फाइनल खेल अत्यन्त प्रतिस्पर्धापूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले रु. १० लाख एक हजार तथा उपविजेताले रु. पाँच लाख एक हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी सर्वाधिक गोलकर्ताले रु. २५ हजार तथा विभिन्न पाँच विधामा उत्कृष्ट खेलाडीले रु. १५ हजारका दरले पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ । रासस